जाँदाजाँदै खनालले भने, 'इगो साँध्ने काम बन्द गरौँ' ! - Kantipath.com
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भारतको अपोलो अस्पतालमा उपचार हुने भएको छ। सोमबार उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका खनाललाई थप उपचारका लागि आज नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट दिल्ली लगिएको हो। नर्भिक अस्पतालमा रहँदा उनको अवस्था स्थिर रहेको थियो। लगातार ज्वरो आएसँगै सास फेर्न गाह्रो भएपछि खनाललाई २ दिनअघि नर्भिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि नर्भिकको विशेष वार्डमा राखेर उनको उपचार जारी राखिएको थियो।
उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुकाअनुसार उनको फोक्सोमा पानी जमेको देखिएको थियो। फोक्सोमा पानी जमेका कारण अक्सिजनको कमी देखिएको थियो। उनलाई निरन्तर अक्सिजनकै सपोर्टमा राखिएको थियो। खनालमा ज्वरो उल्लेख्य घट्न सकेको थिएन। पिसाब तथा रगतमा समेत इन्फेक्सन देखिएको थियो। उनलाई मंगलबार एक पिन्ट रगत समेत दिइएको थियो। हेमोग्लोबिनको मात्रा कमी देखिएपछि रगत चढाइएको थियो।
२ पिन्ट रगत चढाउने योजना बनेको भए पनि शरीरले सपोर्ट नगरेपछि एक पिन्ट मात्र रगत चढाइएको थियो। दिल्ली उड्नुअघि पनि उनलाई निरन्तर खोकी लागिरहेको थियो। अस्पतालमा उनको शरीरसमेत शिथिल देखिन्थ्यो भने कामिरहेका थिए। चिकित्सकहरुले कोभिड हुँदा खनाललाई निमोनियाको समस्या देखिएको र सो समस्या फेरि बल्झिएको समेत आशंका गरेका छन्।
मूलत नेता खनालमा मृगौलाको समस्याबाट हुने लक्षण र कोभिडपछि देखिने लक्षणहरु देखिएको उपचारमा संलग्न चेस्ट फिजिसियन डा. ब्रजेन्द्र श्रीवास्तवले बताए। डा. श्रीवास्तवका अनुसार खनालको रगत र पिसाबमा समेत इन्फेक्सन देखिएको थियो। खनालले एमालेको एकताका लागि आह्वान गरेका छन्। उनले अहंकार र बदलाभाव त्यागेर एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन्। बुधबार उपचारका लागि दिल्ली जाँदाजाँदै खनालले एकताको आह्वान गरेका हुन्। राजनीतिक दलहरु विवाद र ध्रुविकरणले विभाजन उन्मुख रहेको र त्यही अन्तरसंघर्षको परकम्पन एमालेमा पनि देखिएको खनालले उल्लेख गरेका छन्।
‘जनताको चाहना र अपेक्षा विपरीत हामीमा देखिएको अनेकौं गलत प्रवृत्तिहरु, बदलाको भाव र अनावश्यक ईगोका कारण पार्टी जीवनमा यतिखेर गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। देश, लोकतन्त्र र पार्टीको यो अवस्थाले मलाई अत्यन्तै चिन्तित बनाएको छ’, बुधबार खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतमा हामी सबै मिलेर ठूलाठूला सफलताहरु प्राप्त गरेको स्मरण गरौं। एकता सफलताको बाटो हो भने फुट बिनासको। त्यसैले रिस, राग, अहंकार र बदलाभाव त्यागेर पार्टीका वैधानिक प्रकृया अन्तर्गत यो पार्टी फुटबाट जोगाउन तथा एकताबद्ध पार्न म सबै नेता कार्यकर्ताहरुलाई विशेष आह्वान गर्न चहान्छु।’
टुट-फुट र विभाजन नभइ एकता गर्ने गराउने कार्यमा अगाडि बढ्न खनालले सबैमा आह्वान गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय एकता-अखण्डता, लोकतन्त्र र स्थायीत्वको खम्बाको रुपमा रहेका दलहरुभित्र यस्तो हुनु देश, जनता, लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका निम्ती दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसैले, देशका प्रमुख दलहरु र तिनका नेताहरूबीचको अनावश्यक टकराव, महत्वकांक्षा र व्यक्तिगत इगो साँध्ने कार्य यथाशीघ्र अन्त्य गरिनु पर्दछ। हामी सबै एकजुट भएर मुलुकका मुलभूत समस्याहरु हल गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु’, खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दिल्ली जानुअघि खनालले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललाई पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि लाग्न आग्रह गरेका थिए। पोखरेल खनाललाई भेट्न नर्भिक अस्पाल पुगेका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि खनाल सोमबार अस्पताल भर्ना भएका थिए। तर, थप उपचार गर्नुपर्ने भएपछि उनी दिल्ली जान लागेका हुन्।
Previous Previous post: नदी छेउछाउका बस्तीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह
Next Next post: सेजल कोइरालाको मृत्यु प्रकरणका आरोपित नियन्त्रणमा